२०७७ जेठ १० शनिबार ११:१३:००
‘वन्डरफुल !’ सजदाले खुसी हुँदै भनी, ‘मेरो विवाह भैसकेपछि पनि रुपेशको व्यवहारमा कुनै अन्तर आएन । उसले मलाई सधैंभैmं माया गर्यो । सी, मैले भन्याथेँ, ऊ कति अन्डरस्टान्डिङ छ भनेर ।’
विवाह गरेको दोस्रो दिनमा नै सजदा त्यो घरको वर्षांै पुरानो सदस्यजस्तै बनी । नातेदारहरु चिनी । बिनासङ्कोच कुरा गरी । सबैको विश्वास जिती ।
रविलाई यति बढी खुसी देख्दा शकुन्तलालाई भने किनकिन बढी सोचाइ पथ्र्यो ।
रविले सत्य बतायो वा फुक्र्यायो ? सजदाले राम्ररी भेउ पाइन ।
‘ओ हो, यो ल्याम्ब करी किन केही नखाएको ? मन परेन कि क्या हो ? रविले सजदाको रित्तो प्लेटतिर हेरेर भन्यो ।
‘ब्वाइफ्रेन्ड नभएको भए यति राम्रो प्रस्ताव आउँदा कुनै केटीले एस भन्न ढिला गर्थी र ?’
रवि एकछिन केही बोलेन । सजदाको अनुहार पढ्यो । त्यहाँ न त खुसी नै थियो न त ग्लानि नै । ऊ सधैंझंै सामान्य छे ।
‘म साँच्चै नै दुविधामा छु रवि,’ सजदाले रविको हात फेरि समाउँदै भनी, ‘मलाई किन तिमीहरु दुवैजना आदत जस्तो भयो, रुपेश मनमा बसेको छ तर साथमा छैन झैं लाग्छ, तिमी साथमा हुन्छौ तर मनमा छैनौ झंै हुन्छौ !’
‘अँगालोमा म र मनमा रुपेश भएको अवस्थामा कसरी तिमीलाई सम्पूर्ण आफ्नो बनाउन सक्छु ?’ रविले प्रश्न ग¥यो ।
‘रिसको झाँेकमा मोबाइल पनि हेरेकी रहिनछु, मलाई पनि टेक्स्ट गरेको रहेछ ।’ प्रफुल्ल हुँदै भनी ।
‘खोई, मैले तिम्रो फोन चलाउन जानिनँ क्यार, यहाँ त रुपेशको नम्बर नै भेटिनँ ।’ शकुन्तला फÞोन यथास्थानमा राखेर भान्सातिर गइन् ।
‘ओ हो, तिमीलाई त मलाई मन पर्ने सबै आइटम थाहा भइसकेछ ।’ खाना खान सुरू गरेपछि रविले सजदालाई फुक्र्यायो ।
‘तिमी होइन डाक्टरसाहेब, तिम्रो लेखन सफल भयो ।’ सजदाले भनी, ‘आज तिम्रो डायरीले मलाई म स्क्रिजोफेनियाको विरामी हुँ भनेर जान्न मद्दत ग¥यो । केही दिनदेखि म आफैं पनि अन्योलमा थिए । मैले आमालाई मेरो मोबाइलमा रुपेशको नम्बर डायल गरिदिन भनेँ, तर मेरो मोबाइलमा रुपेशको नम्बर नै थिएन । आमालाई रुपेशसँगको फोटो चिन्न भनेँ, आमाले त्यहाँ रुपेशको कुनै फोटो छैन भन्नुभयो, रुपेश कस्तो लाग्यो भनेर सोधेँ, रुपेश घरमा नै नआएको बताउनुभयो ।’